SAFARI ANAGHỊ EMEGHE IBE - ESI MEE - 2019
Nchọgharị Njem Nchọgharị Na-adịghị emepee Weebụ Web: Nsogbu Nsogbu
N'agbanyeghị na Apple akwụsịla nkwado maka Safari maka Windows, Otú ọ dị, nchọgharị a ka na-abụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ a. Dị ka ọ bụla usoro ihe omume ọzọ, ọrụ ya ada ada, n'ihi na ebumnobi na nke onwe. Otu n'ime nsogbu ndị a bụ enweghị ike imeghe weebụ ọhụrụ na Intaneti. Ka anyị chọpụta ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmepe otu ibe na Safari.
Weghaara nsonaazụ ọhụrụ nke Safari
Ihe na-abụghị ihe nchọgharị
Ma, ekwula ozugbo maka nchọgharị maka enweghị ike ịmepee ibe na Intaneti, n'ihi na ọ nwere ike ime, na maka ihe ndị na-enweghị njide. N'etiti ha bụ ndị na-esonụ:
Njiri njikọ Internet gbawara site na onye na-enye ọrụ;
mmebi nke modem ma ọ bụ kaadị netwọk nke kọmputa;
malfunctions na sistemụ;
nbudata site na antivirus ma ọ bụ firewall;
nje na usoro;
nchịkọta weebụ site na onye na-eweta ya;
nkwụsị nke saịtị ahụ.
Nsogbu ọ bụla a kọwara n'elu nwere ngwọta nke aka ya, ma ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ọrụ nke nchọgharị Safari n'onwe ya. Anyị ga-elekwasị anya na ịmepụta nsogbu nke okwu ndị ahụ nke enweghị ohere ịnweta ibe weebụ, bụ nke kpatara nsogbu nke ụlọ ọrụ a.
Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ị gaghị emepee ibe weebụ ọ bụghị naanị n'ihi enweghị ike ịnweta oge, maọbụ nsogbu usoro usoro ihe niile, nke mbụ, ịkwesịrị ịmebe cache nchọgharị. Echekwala na ebe nrụọrụ weebụ jupụtara na nke ndị ọrụ ahụ letara. Mgbe ị na-abanye ha ọzọ, ihe nchọgharị ahụ anaghị eweghachite data na Ịntanetị, na-ebute ibe ya na cache. Nke a na-azọpụta oge dị ukwuu. Ma, ọ bụrụ na cache jupụtara, Safari amalite ịkụda. Na, mgbe ụfọdụ, nsogbu dị mgbagwoju anya, dịka ọmụmaatụ, enweghị ike ịmepe ọhụụ ọhụrụ na Intaneti.
Iji kpochapụ oghere, pịa Ctrl Alt E na keyboard. Ihuenyo nwere ike igosi na ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa cache. Pịa bọtịnụ "Clear".
Mgbe nke ahụ gasịrị, gbalịa weghachite akwụkwọ ahụ ọzọ.
Ọ bụrụ na usoro mbụ ahụ enweghị nsonaazụ ọ bụla, ma ibe weebụ anaghị eburu ya, mgbe ahụ ọ nwere ike ịda mbà n'ihi ezighi ezi ntọala. Ya mere, ịkwesịrị ịtọgharịa ha n'ụdị mbụ ahụ, dịka ha mere ozugbo mgbe ị na-etinye ihe omume ahụ.
Gaa na ntọala Njem Safari site na ịpị akara ngosi ahụ n'ụdị ugwo dị n'akụkụ aka nri nke windo ihe nchọgharị ahụ.
Na menu na-egosi, họta ihe "Tọgharia Safari ...".
Nchịkọta nhọrọ gosipụtara na ị ga-ahọrọ nke data nchọgharị ga-ehichapụ na nke ga-anọgide.
Ntị! A gaghị achọta ozi niile ehichapụnụ. Ya mere, data bara uru ga-ebugo na kọmputa, ma ọ bụ dekọọ.
Mgbe ịhọrọ ihe a ga-ewepụ (ma ọ bụrụ na amataghị ihe kpatara nsogbu a, ị ga-ehichapụ ihe niile), pịa bọtịnụ "Tọgharia".
Mgbe ịtọgharịa ntọala, bubatagharịa ibe. Ọ ga-emeghe.
Ọ bụrụ na nzọụkwụ gara aga enyeghị aka, ma ị maara na ihe kpatara nsogbu ahụ dị na ihe nchọgharị ahụ, ọ dịghị ihe fọdụ, otu esi tinyeghachi ya na nbudata nke mbipute gara aga yana data.
Iji mee nke a, gafee mpaghara mmemme "Uninstall" site na ogwe ntụle ahụ, chọọ nbanye Safari na ndepụta nke meghere, họrọ ya, wee pịa bọtịnụ "Hichapụ".
Mgbe ịchichapụ, wụnye ihe omume ahụ ọzọ.
N'ime ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ikpe, ọ bụrụ na nsogbu nke nsogbu ahụ dị na nchọgharị ahụ, ọ bụghị na ihe ọzọ, mmechi nke usoro atọ a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% na-eme ka mmalite nke ibe weebụ na Safari.